Hogaamiyeyaasha Ciraaq oo cambaareeyey booqasho kedis ah oo Trump uu ku tagay dalkaasi – Radio Daljir
Hogaamiyeyaasha Ciraaq oo cambaareeyey booqasho kedis ah oo Trump uu ku tagay dalkaasi
Diseenbar 27, 2018 5:04 b 0
Siyaasiyiinta iyo hogaamiyeyaasha maleeshiyaadka dalka Ciraaq ayaa si wayn u cambaareeyey booqasho aan la shaacin oo madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump uu ku tagay dalkaasi Ciraaq, waxaana ay ku tilmaameen inuu kusoo xadgudbay madaxbanaanida Ciraaq.
Madaxwaynaha Mareykanka Donald Trump oo ay wehliso xaaskiisa Melania Trump ayaa booqasho qarsoodi ah ku tagay saldhigga ciidamada Mareykanka ee galbeedka magaalada Baqdaad, isagoona halkaasi ugu mahadceliyay ciidamada Mareykanka shaqada ay hayaan.
“Mareykanka masii wadi doono inuu noqdo booliska adduunka” ayuu ka sheegay saldhigga militari ee Mareykanka ee magaalada Baqdaad isagoo ka hadlayay go’aanka ciidamadiisa uu uga saarayo wadanka Suuriya, waxaana shaqada uu sheegay inay sii wadi doonaan dalalka Turkiga uu ka mid yahay.
Sabaax Al-Saadi, hogaamiyaha xildhibaanada xisbiga Islaax ee Ciraaq ayaa ku baaqay fadhi degdeg ah oo baarlamaanka uu ka yeesho waxaa uu ku tilmaamay gardarada iyo ku xad gudubka madaxwayne Trump ee dalka Ciraaq, isagoo ku tilmaamay qabsashadii Mareykanka ee Ciraaq inay dhamaatay.
Xisbiga Islaax ayaa waxaa madax ka ah hogaamiyaha shiiicada ee Muqtadda Al-sadar, kaasi oo siwayn uga soo horjeeda duulaanka iyo joogista Mareykanka ee Ciraaq oo xukunka ay kaga tuureen hogaamiyihii hore Saadaam Xuseen 2003dii, kadib markii lagu eedeyey inuu xiriir la lahaa Al-qaacidda uuna haystay hubka wax gumaada, taasi oo markii dambe beenowday.
Madaxwaynaha Mareykanka ayaa booqashadiisa wadanka Ciraaq oo qaadatay sadex saacadood ayaan wax kulan ah kula yeelan masuuliyiinta dowladda Ciraaq, taasi badalkeedana waxaa khadka taleefanka uu kula hadlay raysal wasaaraha Ciraaq Caadel Cabdul Mahdi oo kulankooda uu qorshaha ahaa, balse markii dambe khadka taleefanka ka wada hadlay.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska raysal wasaaraha Ciraaq ayaa lagu sheegay dowladda Ciraaq in lagu soo wargeliyay booqashada trump, balse aanay dhicin kulann toos ah oo badalkeeda khadka taleefanka ay ku wada hadleen Trump iyo raysal wasaaraha Ciraaq.
Xildhibaano katirsan baarlamaanka Ciraaq oo wakaaladda wararka Reuters ataa sheegay labada hogaamiye inay wada qorshaynayeen inay kulan yeeshaan, balse muran uu hareeyey, sababtoo ah madaxwayne Trump ayaa dalbaday in kulanka uu kadhaco saldhigga militari Cayn al-Asad, taasi oo raysal wasaaraha Ciraaq uu diiday.
Boqolaal kun ayaa ku geeriyooday colaadda Ciraaq tan iyo sanadkii 2003dii, waxaana dadka wax falanqeeya ay aaminsanyihiin inuu ahaa faragalintii ugu wayneed ee dibadda ee Mareykanka uu qaaday taariikhda dhow.
Induniisiya oo wali laga sheegayo musiibooyin hor leh
Musharrax Cali Xaaji Warsame oo wareysi uu siiyey Radio Daljir ku bayaamiyey doorashada Puntland iyo damaciisa waxqabasho haddii la doorto (dhegayso)